अभनेत्री वर्षा राउत्त अब छिट्टैं वैंवाहिक बन्धनमा बाँधिने ! »
Home/Entertainment/अभनेत्री वर्षा राउत्त अब छिट्टैं वैंवाहिक बन्धनमा बाँधिने !
EntertainmentNepali News (नेपाली)News
अभनेत्री वर्षा राउत्त अब छिट्टैं वैंवाहिक बन्धनमा बाँधिने !
काठमाडौं, पौष ३० ।
पछिल्लो समय चर्चामा रहन सफल नायिका वर्षा राउत अभिनेता संजोग कोईरालासँग प्रेम सम्बन्धमा रहेकी छिन । अब, अभिनेत्री वर्षा राउत विवाह बन्धनमा बाँधिने भएका छन् । आगामी प्रेम दिवस अर्थात फागुन २ गते दुबैले लगनगाँठो कस्ने भएका हुन् । अभिनेत्री वर्षाले सोमबार आफ्नो आधिकारीक फेसबुकमार्फत एक कार्ड शेयर गर्दै विवाह मिति सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
प्रेमको प्रशंसा गर्दै लेखिएको कार्डमा भनिएको छ “हामीलाई अत्यन्त खुसी महशुस भइरहेको छ । हामी जीवनभरका लागि यात्रा सुरुवात गर्न गइरहेका छौ ।” सोही कार्ड अभिनेता संजोगले पनि शेयर गरेका छन् । विवाह कहिले गर्ने ? प्रश्नले हैरान भएका यी कलाकारले अब भने मिडियाको यस्तो प्रश्नबाट छुटकारा पाउने भएका छन् ।
अभिनेत्री बर्षा पछिल्लो समयकी ब्यस्त अभिनेत्री हुन् । उनले अभिनय गरेको फिल्म ‘चौका दाउ अहिले प्रदर्शनरत छ, भने ‘गोपी’ केही सातापछि प्रदर्शनमा आउँदैछ । ‘नाइँ नभन्नू ल ४’ बाट बर्षाले नेपाली चलचित्र अभिनय डेब्यु गरेकी हुन् ।
अभनेत्री वर्षा राउत्त अब छिट्टैं वैंवाहिक बन्धनमा बाँधिने ! काठमाडौं